Resident Evil2ရဲ့ အခက်ဆုံး Hardcore Mode ကို ၂ နာရီခွဲနဲ့ ဘယ်လိုကစားမလဲ? - PX
Resident Evil2ရဲ့ အခက်ဆုံး Hardcore Mode ကို ၂ နာရီခွဲနဲ့ ဘယ်လိုကစားမလဲ?
Resident Evil2Remake ကို အခက်ဆုံး Difficulty (Hard Core) နဲ့ အောင်ဖူးပြီလား? ဒီ Mode ကိုအောင်ရင် ဆရာကျပြီလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် Hard Core ထက်ပိုခက်တဲ့ 4th Survivor Mission တွေ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်အခုပြောသွားမယ့် Guide မှာတော့ Boss တွေကို ဘယ်လိုချနိုင်မလဲ? သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၂ နာရီခွဲအတွင်း ဝင်အောင် ဘယ်လို ကစားနိုင်မလဲ အတိုလေး ပြောပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂ နာရီခွဲအတွင်း ကစားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Hardcore Mode ကို ၂ ခါ လောက် အလွတ် Try စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောသွားမယ့် Guide ဟာ ဂိမ်းသဘောတရား (Game Mechanic) ကို နားလည်ပြီးသားသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Stage G 3
ဘာလို့ ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့ Hardcore မှာ အမြန်အောင်ဖို့နဲ့ မသေဖို့ ဒီ ၂ ချက်နဲ့ပဲ ကစားရမှာပါ။ အခက်ခဲဖြစ်စေမယ့် အပိုင်းတွေကို စာနဲ့ ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရင် Try ပြီးမှ လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Reference Play Style က No Death ၊ No Wasting Time ၊ Safe Play ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်သက်သလို ကိုးကားနိုင်ပါတယ်။
Hardcore Mode မှာ
Ammo Resource နည်းသွားပြီး Ink Ribbon (For Saving) နဲ့ Replace လုပ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
Gadget တွေကိုတော့ Replace မလုပ်ထားပါဘူး၊
Pouch ၂ ခုပဲ ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပစ္စည်းတွေ ကြိုက်သလို မသယ်နိုင်ပါဘူး၊
S+ Rank ရဖို့ Speedrun ကစားမယ်ဆိုရင် အချိန် ၂ နာရီခွဲပဲ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
LE5 (Image Credit: Resident Evil Wiki)
တကယ်လို့ Hardcore Mode ကို Character ၂ ယောက်လုံးနဲ့ အောင်ခဲ့ရင်
Leon = ∞ LE5 နဲ့ ∞ Launcher
Claire = ∞ Gattling Gun ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
အခုလို Infinite Weapon တွေရရှိဖို့ S+ Rank နဲ့ အောင်ရမှာဖြစ်ပြီး ကန့်သက်ချက်ကတော့ ၃ ကြိမ်ပဲ Save ခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Standard Mode မှာ ရထားတဲ့ Infinite ∞ Pistol နဲ့ ကစားခွင့်ပေးပေမယ့် S+ မရပါဘူး။ (You cannot Cheat in this mode too)
ဂိမ်း Difficulty ကလည်း ရေလည်မြင့်သလို ပြန်ရမယ့် Reward ကလည်း မနည်းပါဘူး။ ဘယ်နားမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာကအစ နှံ့နှံ့စပ်စပ် သိထားဖို့လိုသလို Close Encounter ရင်ဆိုင်ရတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ မသေအောင် (အဓိက Point) ကစားမလည်းဆိုတဲ့ Experience က ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။
ATM-4 (Image Credit: Resident Evil Wiki)
အဲ့ဒါကြောင့် Hardcore ကို ၂ ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ်မက လေ့ကျင့်ဖို့လိုပြီး ကိုယ့် Limit ဘယ်လောက်ထိ ရှိမလဲ အရင် Try စေချင်ပါတယ်။ မအောင်မြင်တဲ့အဆုံးကျမှ Guide & Tips ကို လေ့လာပြီး ကစားစေချင်ပါတယ်။
First things First! Get the Arsenal
Hardcore အတွက် အသုံးတည့်ဆုံး လက်နက်ကတော့ ∞ Knife ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Standard သို့ Assisted Difficulty မှာ Mr. Raccoon ၁၅ ရုပ်လုံး ပစ်ထားရင် ဘယ်တော့မှ မကျိုးတဲ့ ∞ Survival Knife ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mr. Raccoon (Image Credit: Polygon)
Second Tip: Start with Leon A or Claire A
Campaign B ကို Speed Run အတွက် မ Try စေချင်ပါဘူး။ M19 (Leon) နဲ့ Quickdraw Army (Claire) ပစ္စတို ၂ လက် ရမှာဖြစ်ပေမယ့် No More Room to Spare သယ်စရာ အိတ်မရှိပါဘူး။
Reticle (Control your Aim)
Reticle ဆိုတာက Latin ဘာသာကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး ချိန်ကွင်း ဒါမှမဟုတ် Scope ၊ Sight လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hardcore မှာ ဇွန်ဘီတွေကို အသေသတ်ဖို့ မစဥ်းစားပါနဲ့၊ Escape လုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းကိုပစ်ပြီး ၂ စက္ကန့်လောက် တွေဝေသွားအောင် လုပ်နိုင်တာ မမေ့ပါနဲ့။ ဒါကြောင့် Reticle Aiming ကို တစ်ချက်ထဲနဲ့ Headshot ရအောင် လေ့ကျင့်ပါ။
Dramatic Entrance (Don’t you Spoil it!!)
Leon နဲ့ ဆော့တဲ့ ဘယ်သူမဆို Spade Key နဲ့ Jack Handle သွားယူတဲ့အခန်းကို စိတ်ပျက်မယ် ထင်ပါတယ်။
အဲ့နေရာမှာ ဇွန်ဘီတွေ မိသားစုလိုက် စောင့်နေတဲ့အပြင် Tyrant ကြီးပါ လိုက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Dead End ပါပဲ။
Tip: Gather all Wooden Boards
ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ? အလွယ်ဆုံးကတော့ Early Game မှာ ရထားတဲ့ Wooden Boards ၄ ခုကို Key Card မယူခင် Spade Door နေရာအထိ ပြန်သွားပြီး ပြတင်းလေးတွေ ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Late Game အတွက် Protection ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
1st Tip: Respect Licker!!
Licker ကိုတော့ အထွေထူး ပြောနေစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ တိတ်တိတ်နေရင် ငါတို့မင်းကို ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက် ဘယ်လိုကစားနိုင်မလဲ?
အလွယ်ကူဆုံးကတော့ Alert မလုပ်ပါနဲ့!!
3rd Floor က Tip ကို ဖတ်ထားဖူးရင် Licker နဘေး လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတာ သိမယ်ထင်ပါတယ်။ လျှောက်လို့ရတိုင်းလည်း စွတ်မလျှောက်ပါနဲ့၊ Licker Sense ကို တွေဝေသွားအောင်လုပ်နိုင်တာ ကန်းဗုန်း (Flash Grenade) ပဲ ရှိပါတယ်။
Image Credit: Alpha Corders
သူ့နား ဖြတ်လျှောက်လိုက်တာနဲ့ ဟင်! ဘာလဲဟ? ဆိုတဲ့ အာမေဋိတ်သံလေး ထွက်လာပါမယ်၊ အဲ့အသံထွက်လာရင် Search out လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သွားစရာ ရှိတာမြန်မြန်သွားလိုက်ပါ။
တကယ်လို့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ 1 Hit = Danger ဖြစ်သွားနိုင်တာကို သတိထားပါ။
သိထားရမယ့် Tip က
Licker တွေဟာ တံခါးမဖွင့်တတ်ပါဘူး။
မမြင်ရပေမယ့် လုပ်နိုင်တဲ့ Trick က Licker Sense ကို ကန်းဗုန်း (Flash Grenade) နဲ့ ၄ စက္ကန့်လောက် Paralyze လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက ပြေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Licker runs faster than you.
အဲ့တော့ Engage လုပ်မယ်ဆိုရင်
ကန်းဗုန်းကျဲပြီး နီးစပ်ရာ အခန်းထဲဖြစ်စေ Licker ကို အသေသတ်သည် ဖြစ်စေ ရဲရဲတင်းတင်းကစားပါ။
Best Suggestion: Avoid
Licker တစ်ကောင်ကို သတ်မယ်ဆိုရင် Shotgun ကျည် ၄ တောင့်၊ Grenade Launcher ၂ လုံး၊ ပစ္စတိုကျည် ၁၀ ကနေ ၁၂ တောင့် ခေါင်းကိုချည်းပစ်မှ သေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့ Hardcore Level မှာ အနှောက်ယှက်ပေးမယ့် Licker ကိုပဲ သတ်စေချင်ပါတယ်။
Location: 2nd Floor ၊ S.T.A.R.S Office
Character: Both Leon & Claire
RPD ထဲ ရောက်တာနဲ့ Shotgun (Leon) ၊ Grenade Launcher (Claire) အရင်ရအောင်ယူ၊ Survival Item အလုံလောက် ရပြီဆိုတာနဲ့ Medallion ၃ ခုတပြိုင်နက်ယူပါ။ နတ်သမီးဆီက Medallion ယူရင် Licker ကျလာမှာမလို့ ခုနပြောတဲ့ Tips လို သေအောင် သတ်ရင်သတ် မသတ်ရင်လည်း Escape Strategy ကို ကြိုပြင်ထားပါ။
Tip: C4 ကွဲတဲ့အရှိန်ကြောင့် ဗီဒီလဲပြီး Library သွားတဲ့တံခါး ပိတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဗီဒိုပြန်ထောင်၊ တွဲလျောင်းကျနေတဲ့ ဇွန်ဘီကိုသတ်ပြီးမှ အေးဆေး Medallion ယူလိုက်ပါ။ Licker ကျလာရင် တည့်မပြေးဘဲ ညာဘက်ကို ကပ်သွားပါ။ တကယ်လို့ ခုန်ကုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ လျှာနဲ့ဟပ်သည်ဖြစ်စေ တခါထဲ Library ထဲ ပြေးပါ
Dun try to beaBad-ass Zombie Killer
Hardcore မှာ 1 Hit = Danger တန်းဖြစ်တာ မမေ့ပါနဲ့၊ ဇွန်ဘီတွေကအစ Hitpoint (Hp) ပိုများပြီး Damage လည်း ပိုများတဲ့အတွက် အချိန်ကုန်ခံပြီး ပစ်သတ်မနေပါနဲ့။
Mr.X! Know him before?
သူ့ကိုတော့ RE Fans တွေက Mr.X လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Origin ပြောရရင်တော့ Terminator T-800 လိုပဲ မာကလောင်တောင်ပြီး သတ်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက် T-103 လို့ Umbrella ကင်ပွန်းတပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် T က Terminator မဟုတ်ပါဘူး၊ T-virus ကို အတိုကောက် ခေါ်တာပါ (T = Tyrant)
Image Credit: Molemitts
Remake Version မှာ Mr.X ထွက်မယ့်နေရာကို Machine Learning (A.I) သုံးပြီး Player တွေနောက် လိုက်ဖို့ အသုံးပြုတယ် ဆိုပါတယ်။ ဇာတ်ရှိန်တက်တာလည်း Mr.X လိုက်တဲ့ အခန်းတွေဆိုတော့ သိထားရမယ့်အချက်က လေးလံတဲ့ ခြေသံကို နားစွင့်ပါ။
Tip: Mr.X ဟာ Dark Room ၊ S.T.A.R.S Office နဲ့ Clock Tower ထဲထိ မလိုက်ပါဘူး
တကယ်လို့ ချောင်ပိတ်မိနေပြီဆိုရင် ကန်းဗုန်းသုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့၊ ခေါင်းကိုပဲ ၁၀ ချက်လောက် ဆက်တိုက်ပစ်နိုင်ရင် စက္ကန့်ပိုင်းလောက် Knock Out ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဒီ ၂ ချက်ကို မမေ့ပါနဲ့။
ဒီနာမည်ကိုတော့ Resident Evil မူရင်းဇာတ်လမ်းမှာ ခေါ်ဝေါ်တဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Super လို့ သုံးနှုန်းရတဲ့အချက်က ပိုပြီးအဖျက်စွမ်းအားမြင့်တယ်လို့ သုံးနှုန်းချင်ပါတယ်။ သိထားရမှာက T-virus (Tyrant Virus) ဟာ ကူးစက်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ တဆင့်ပြီးတဆင့် Mutation ဖြစ်ဖို့ ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ လက်နက်ဖြစ်တဲ့ အချက်ပါ။
Super Tyrant (Image Credit: Game Revolution)
Super Tyrant ကိုတော့ Highest Mutation လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး Viral Strain တမျိုးထဲနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့အထဲမှာ အသိဥာဏ်အမြင့်ဆုံး ဇီဝလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ (Compare: Nemesis ၊ Queen Leech (Dr. Jame Marcus) ၊ Lisa Trevor)
Super Tyrant ကို Counter လုပ်နိုင်တဲ့ အချက်မရှိပါဘူး။ Origin မှာတောင် Albert Wesker ကို အသေထိုးသတ်တဲ့အထိ ကြမ်းထားသလို Super Tyrant ကို တားချင်ရင် အသေသတ်ရုံပဲ ရှိပါတယ်။
Infamous William Birkin?
Resident Evil2ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးဟာ Stage G Mutation ကြောင့် ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက် မဖြစ်အောင် ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Gameplay တလျှောက်လုံးမှာ Stage G ၅ မျိုးအထိ Mutation ဖြစ်တာကို ပြထားပြီး နှိမ်နှင်းနိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံး အချက်ကို အဝါရောင် Weak Point တွေ အဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် Stage G 1 နဲ့2အဆင့်မှာ မျက်လုံး ၊ G3မှာ မျက်လုံး ၃ လုံးအထိ ပါဝင်လာပြီး G-virus ကြောင့် ရေနှုတ်မြောင်းတလျှောက်မှာ G-adult Mutation ဖြစ်နေတာကိုပါ ပြထားပါတယ်။ Stage G4နဲ့5မှာတော့ Umbrella A.I (Red Queen) က အမြင့်ဆုံး Mutation Level အဖြစ် မြေအောက် သုတေသနခန်း (NEST) မှာ အသေသတ်ဖို့ ထိန်းချုပ်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Boss Fight တွေမှာ အားနည်းချက် (မျက်လုံးနဲ့ အဝါရောင် Spot) တွေကို ပစ်ပြီး နှိမ်နှင်းနိုင်တာ သိထားပါ။ Mutation Level တစ်ခုတိုင်းမှာ William တိုက်ခိုက်ပုံတွေ မတူသလို Highest Level မှာ သတ္တဝါလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီး တရစပ်လိုက်တိုက်တာ၊ ပတ်ရမ်းတာ၊ ခုန်ချတာမျိုး ပါလာတဲ့အတွက် အရင်ဆုံး အထာနပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
There’s only Trick..
William ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို သိသွားပြီးမှ Damage အပြင်းဆုံး Lightning Hawk ဒါမှမဟုတ် Powerful Magnum Rounds တွေနဲ့ Weak Spot ကို အရင်ပစ်ပြီး အားနည်းသွားတဲ့အချိန်ကျမှ အနုဆုံးနေရာကို ဓားနဲ့ထိုင်ခုတ်ပြီး အချိန်တိုတိုနဲ့ ဖြတ်နိုင်တာကို လေ့ကျင့်ပါ။
Full Euipped Lightning Hawk formerly used by Albert Wesker (Image Credit: IGN)
ပြောရင်သာ လွယ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါ အကြိမ်မနည်း Try ရမှာ စိတ်ချပါ။
Sewer ခန်းမှာ G adult ကို ရေရေလည်လည် စိတ်ပျက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဖမ်းမိပြီ ဆိုတာနဲ့ သွားပုပ်ရည်နဲ့ ထိုင်လောင်းနေမှာ ဖြစ်သလို အဆိပ်မိသွားရင် တုံ့နှေးတုံ့နှေး သွားနေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးက အဖမ်းမခံပါနဲ့။
Disgusting G-Adult (Image Credit: VGR)
Leon နဲ့ကစားရင် ကန်းဗုန်း ဒါမှမဟုတ် လက်ပစ်ဗုန်းနဲ့ တွေဝေသွားအောင် တစ်လုံးလောက် ပစ်ကျွေးပြီး လွတ်အောင် သွားပါ။ Claire နဲ့ကတော့ Acid Round နဲ့ ကိစ္စပြတ်တာမို့ အခက်ခဲ သိပ်မရှိပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာက ပြေးဖို့ လွတ်မယ် သေချာမှ ဗုန်းနဲ့ထုပါ၊ နို့မို့ ကိုယ်ပါ ရောပိတ်ပြီး G-adult ၂ ကောင်ရိုက်တာမျိုး ခံရတတ်ပါတယ်။
IVY? (Don’t Get to close!!!)
RE Fans တွေ ဆိုရင်တော့ IVY အားနည်းချက်နဲ့ စက်ဆုပ်ဖွယ် Instant Kill လုပ်နိုင်တာကို သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အားနည်းချက်ဆိုတာက Ivy မှာလည်း Regenerate လုပ်နိုင်တဲ့ Weak Point ရှိပါတယ်။
ဒါကို အဝါရာ ပန်းပွင့်ပုံစံနဲ့ တွေ့နိုင်ပြီး သေနတ် ဒါမှမဟုတ် ဓားနဲ့ခုတ်တာနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းလောက် တွေဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IVY is more terrifying in Remake Version
Weak Point အားလုံးကိုပစ်မှ IVY ဟာ မိနစ်ပိုင်းခန့် ငြိမ်သက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Dispersal Cartridge (ပိုးသတ်ဆေးစာ) မမိခင် ဒါမှမဟုတ် လုံးဝ Regenerate မလုပ်နိုင်တဲ့အထိ မီးရှို့သတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
Hardcore မှာတော့ အချိန်မရတဲ့အတွက် Weak Point လောက်ပဲ ပစ်ပြီး ရတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလေး အတွင်းမှာ လွတ်အောင် ရှောင်သွားပါ။
အရေးကြီးဆုံးက Lab Code တွေကို မှတ်မိဖို့ပါပဲ။ Standard နဲ့ Hardcore မှာ Code မတူတဲ့အတွက် စမ်းကစားတဲ့အခါမှာ ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ယူထားလိုက်ပါ။ အချိန်ကုန် သက်သာစေပါတယ်။
Stage G 4
Claire နောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ Stage G4(Complete Mutation Predicted by Red Queen) ကို တချို့လူတွေ စိတ်ပျက်ကြပါတယ်။ Gattling Gun ပေးထားပေမယ့် မနိုင်ကြဘူး။ တိုက်ခိုက်ရတဲ့ နေရာကလည်း ကျဥ်းတော့ အချိန်မကြာသင့်ပဲ ကြာသလို မသေသင့်ပဲလည်း သေတတ်ကြပါတယ်။
အရင်ဆုံး Stage G4ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို သတိပြုလိုက်ပါ။ သူဟာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရထားပေါ်က ခုန်ချမယ်၊ ပြီးသွားရင် ကမူးထူးရှိုးနဲ့ အတင်းပြေးတိုက်ပြီး Claire ကို Knock Out လုပ်မယ်၊ ပြီးသွားရင် နံရံပေါ်တက်ပြီး ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာကို လှမ်းခုန်ချတယ်။
Stage G4Art (Image Credit: Steam Community)
ဒီ ၃ ဆင့်လုံးမှာ လိုက်ပြေးတိုက်တာက တော်တော်ဆိုးပါတယ်၊ အများသောအားဖြင့် မရှောင်နိုင်ကြသလို တိုက်မိတာနဲ့ တန်း Danger ဖြစ် အခန့်မသင့်ရင် သေတဲ့အတွက် တိုက်မယ်မှန်းသိရင် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ မနေပါနဲ့။
ပြေးတဲ့ပုံစံက တည့်ပဲဆိုပေမယ့် Claire ရှိတဲ့ဖက်ကို စီယာဒိုင်လှဲ့ပြီး လိုက်တိုက်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ဝေးနေရင် လွတ်နိုင်ပေမယ့် နီးလွန်းနေရင် ကွိပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါ။ မနီးမဝေးမှာ ဖြစ်နေရင် ဘယ်ဘက်ဖြစ်စေ၊ ညာဘက်ဖြစ်စေ ဝိုက်ပြီးပြေးပါ။
Stage G4Claire Campaign (Image Credit: Polygon)
သဘောက Stage G ဟာ အရှိန်ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ကွေ့ပြေးတဲ့ဘက်ကို ချက်ချင်းမလှည့်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ခါကျရင် နံရံနဲ့စောင့်ပစ်ပြီး ခေတ္တတွေဝေနေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုမလုပ်ချင်ရင် ပြေးတိုက်ဖို့ အရှိန်ယူနေချိန် Magnum Round နဲ့ တန့်သွားအောင် ပစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Standard မှာပဲ Try ကြည့်ပါ။
ရထားပေါ်မှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ Stage G5ကတော့ လွယ်ပါတယ်။ Campaign B ကို Hardcore မှာ ကစားဖို့ Recommend မပေးတဲ့အတွက် အခု Guide ကို ဖတ်ရှုရင်း အကျိုးရှိရင် ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။
ဒေါ်လာ ၂ သောင်းအထိ ရရှိနိုင်မယ့် HUAWEI Film Award မှာ ဝင်ပြိုင်နိုင်ပြီ
ဒေါ်လာ ၄၀၀ တန် iPhone SE2 ကို မတ်လအတွင်း ကြေညာဖွယ်ရှိတဲ့ Apple